Ho gaga ianao amin'ny zavatra maro manelingelina olona iray amin'ny pejy iray izay ahatongavany. Kitendry, fitetezana, sary, teboka bala, teny sahisahy… izy rehetra dia misarika ny sain'ny mpitsidika. Na dia tombony iray aza izany rehefa manatsara pejy ianao ary minia mamorona ireo singa ireo hanaraka ny mpitsidika, ny fampidirana singa diso na singa ivelany dia mety hampiala ny mpitsidika ny hetsika fiantsoana tadiavinao hikitika azy ireo ary hiova fo.
Ny zavatra voalohany ataontsika amin'ny dia dia ny sarintany ny niandohana sy ny toerana halehany, avy eo manome ny làlana mahomby indrindra eo anelanelany. Rehefa ianao mametaka ny pejinao fitobiana, antenaina fa manao zavatra mitovy amin'izany ianao - mieritreritra momba ny fiavian'ireo mpitsidika anao ary tsy mametraka fanontaniana intsony hoe ho aiza ny toerana halehany. Eto dia Lesoka mahazatra 9 azonao atao rehefa mamorona pejy fitobiana (saingy tokony hialana):